Hammer of Thor ᐅ သုံးသပ်ချက်များ၊ ဆေးဆိုင်ရှိ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
Myanmar (မြန်မာ) >> Hammer of Thor – လိင်တံ၏ အလျားနှင့် အထူကို +၅ စင်တီမီတာအထိ တိုးစေသည်။ လျှော့စျေးဖြင့် မြန်မာမှာဝယ်ပါ!
(556 ratings, average: 4.40)
မြန်မြန်လုပ်ပါ! လျှော့စျေးဖြင့်6ထုပ်များ ကျန်ပါသည်။
ယနေ့သာ။ 50% လျှော့စျေး
99980 K 49990 K
Hammer of Thor – လိင်တံ၏ အလျားနှင့် အထူကို +၅ စင်တီမီတာအထိ တိုးစေသည်။ လျှော့စျေးဖြင့် မြန်မာမှာဝယ်ပါ!
25.12.2021 Nata Myanmar (မြန်မာ)
Hammer Of Thor – လိင်တံကို ကျယ်စေရန် အသုံးပြုသော သဘာဝအစက်များသည် အမျိုးသားများ၏ ကျန်းမာရေးကို ပြန်လည်ကောင်းမွန်စေခြင်း၊ အာနိသင်နှင့် စိုက်ထူခြင်းတို့ကို ကောင်းမွန်စေပါသည်။ ပြဿနာများ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေပါက၊ အိပ်ရာထဲတွင် သော်လည်းကောင်း ဆရာဝန်နှင့် ရက်ချိန်းယူရန် ခွန်အားမရှိသော်လည်း သဘာဝနှင့် ထိရောက်သော ဆေးဝါးများကို စမ်းကြည့်ရန် အချိန်ကြာမြင့်နေပါသည်။
မနက်ခင်းမှာ စိုက်ထုတ်ခြင်း မရှိတော့ဘဲ ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ အစွမ်းသတ္တိက သင့်ကို ကျောခိုင်းသွားသလို ခံစားရတယ်
အာနိသင်က ညံ့ဖျင်းပါတယ်၊ ရင်းနှီးတဲ့ ပွတ်သပ်မှုတွေကနေတောင် စတင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး၊
ထည့်သွင်းစဉ် သို့မဟုတ် ကွန်ဒုံးကို ဆွဲထုတ်ရန် ကြိုးစားသည့်အခါ လိင်တံ ကျသွား၊
မိန်းကလေးက ဘာမှ မခံစားရဘဲ အော်ဟစ် ညည်းတွားချင်နေတာ၊
အော်ဂဇင် ဆုံးရှုံးသွားပါပြီ၊ သူတို့ရဲ့ တောက်ပမှု၊ သုက်လွှတ်မှုက မြန်လွန်းတယ်၊
အတိုင်းအတာ (အလျားနဲ့ ထုထည်) က မင်းနဲ့ မကိုက်ညီဘူး၊
ရှက်ခြင်း၊ ကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ အဆင်မပြေမှုတွေက မင်းရဲ့ အပေါင်းအဖော်တွေ ဖြစ်လာတယ်။
သင့်လက်တွဲဖော်ကို အံ့အားသင့်စေလိုပါက Hammer Of Thor ကိုအသုံးပြုပါ။ အဆိုပါဆေးကို လူငယ်များနှင့် အငြိမ်းစားယူသူများရော အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သက်သေပြထားသော သဘာဝပစ္စည်းများသာရှိနေသောကြောင့် ဓာတ်မတည့်မှုတုံ့ပြန်မှုအန္တရာယ် မရှိပါ။ ကျားဟော်မုန်း ၏
အိပ်ရာထဲတွင် မက်မောခြင်းကို မြှင့်တင်ပေးပြီး ခံနိုင်ရည်ကို တိုးစေသည်;
ပုံမှန်သွေးစီးဆင်းမှုကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ;
ဆီးကျိတ်ရောင်ခြင်း၊ adenoma၊ cystitis ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ချေကို လျှော့ချပေးခြင်း၊
အဆိပ်အတောက်များကို ဖယ်ရှားခြင်း၊ လိင်ဆက်ဆံခြင်းကို ကြာရှည်စေခြင်း၊
လိင်တံအရှည်ကို တိုးစေပြီး ၎င်းကို ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ ပိုမိုတောက်ပသည်။
သတိပေးချက်! ဆေး၏ထိရောက်မှုအတွက် အဘယ်အရာများက တာဝန်ရှိသနည်း။
Antica krill extractသည် ဇင့်အရင်းအမြစ်ဖြစ်ပြီး အမျိုးသားခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်သော ဗီတာမင်ဓာတ်များ ရှုပ်ထွေးပါသည်။
ကာလနာ အသည်းမှ ထုတ်ယူသည်။ ဉာဉ်သည် ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်ကို ပြန်လည်ကောင်းမွန်စေပြီး ပုံမှန်သွေးစီးဆင်းမှုကို အစပျိုးပေးကာ လိုင်နာကောင်များကို ပြည့်ဝစေပြီး ထုထည်နှင့် အရှည်ကို သဘာဝအတိုင်း တိုးလာစေပါသည်။
မြောက်ဘက်ရေညှိထုတ်ယူသည် စိုက်ထူစေသည်။ ကျောက်။ Hammer Of Thor ဖြင့် သင်သည် နေ့ရောညပါ အချိန်မရွေး လိင်ဆက်ဆံရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ!
litheras မှထုတ်နှုတ်သောကျောရိုးမဲ့ကလေးများသည် အာရုံခံစားမှုနှင့် အာရုံခံနိုင်စွမ်းကို ပြန်လည်ရရှိစေသည်။ ထိတွေ့မှု၊ ပေါ့ပါးသောအနမ်း သို့မဟုတ် ပူပြင်းသောည၏အတွေးကြောင့် သင်သည် စာသားအတိုင်း နှိုးဆွနိုင်သည်။
Hammer Of Thor အသုံးပြုနည်း။
အသုံးပြုရန်အတွက် လမ်းညွှန်ချက်များတွင် ပါဝင်ပါသည်။ အထုပ်တစ်ခုစီ။ စောင့်ကြည့်ပါ။ မဟုတ်ပါက ဆေး၏ထိရောက်မှု သိသိသာသာ လျော့ကျသွားနိုင်သည်။ မည်သည့်ဆေးကိုမဆို မှန်မှန်ကန်ကန်နှင့် ဖော်ပြထားသည့် ပမာဏအတိုင်း သောက်ရမည်ကို သတိပြုသင့်သည်။ စိတ်အားထက်သန်သော ညမအိပ်မီ ကုထုံးကိုလည်း သုံးနိုင်သည်။ ဤကိစ္စတွင်၊ သင်သည် ရင်းနှီးမှုမပြုမီ မိနစ် 20-30 တွင် 5-7 စက်ကို ပါးစပ်ဖြင့်သောက်ရန် လိုအပ်သည်။ ဆက်ဆံရေး။
သတိပေးချက်! အကြောင်းရင်းမှာ တက်ကြွပြီး အစွမ်းထက်သော ဒြပ်ပေါင်းသည် အပျိုဖော်ဝင်ခြင်းကို ထိခိုက်စေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် အစက်များဖြင့် ကစားပါက ပန်းသေခြင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကမောက်ကမဖြစ်ခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ဆီးကျိတ်ရောင်ခြင်း၊ cystitis နှင့် မျိုးမအောင်နိုင်ခြင်းများ ဖြစ်နိုင်သည်။ ပြင်သစ်):
စျေးကွက်သည် အစွမ်းထက်သော သို့မဟုတ် စိုက်ထူမှုအတွက် အမျိုးမျိုးသော အစက်အပြောက်များနှင့် ဖော်မြူလာများကို ပေးဆောင်ပါသည်။ ဤဆေး၏ထူးခြားချက်မှာ အမျိုးသား genitourinary စနစ်အပေါ် ရှုပ်ထွေးသောအကျိုးသက်ရောက်မှုတွင် တည်ရှိပါသည်။ ဓာတုပစ္စည်းများသည် သွေးလည်ပတ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ် အပြုသဘောဆောင်သော အကျိုးသက်ရောက်မှု၊ သွေးစီးဆင်းမှုကို အရှိန်မြှင့်ပေးကာ တစ်ရှူးများနှင့် သွေးကြောများကို အားကောင်းစေကာ ခန္ဓာကိုယ်ကို အောက်ဆီဂျင်နှင့် ပြည့်ဝစေပါသည်။ 2-3 ကြိမ် စားသုံးပြီးနောက်တွင် သင်သည် ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိလာကြောင်း ခံစားရပါလိမ့်မည်။ တဖြည်းဖြည်း၊ ထုတ်ကုန်သည် မတူညီသောခန္ဓာကိုယ်စနစ်များ- endocrine၊ နှလုံးသွေးကြော၊ ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ၊ အာရုံကြောများကို ပြန်လည်ရရှိစေသည်။
ဖောက်သည်များသည် Hammer Of Thor အကြောင်း သုံးသပ်ချက်များကို မည်သို့ချန်ထားခဲ့သနည်း။
Plamen အသက် ၄၅ နှစ် (ဘူလ်ဂေးရီးယား))
ပထမတော့ ကျွန်တော် ဆေးဆိုင်ကိုသွားပြီး သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အတွက် ဆေးဝယ်နေတယ်ဆိုလို့ ငွေရှင်းတဲ့ ကောင်မလေးကို ပြောပြခဲ့တယ် (ဒါပေမယ့် ဘယ်သူက ယုံမှာလဲ။ အဲ့ဒါ?) အမျိုးသားတွေအတွက်တော့ ဒါက ရင်းနှီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါ။ အလုံပိတ်အထုပ်ကို ယူလာရတာကို ကြိုက်တယ်။ အရသာက ထူးဆန်းပေမယ့် အလုပ်လုပ်တယ်။ မနက်ခင်းမှာ wow!
ဘာဘရာ၊ အသက် 52 နှစ် (ဂျာမနီ):
ကျွန်တော် Hammer Of Thor ကိုယူပြီး လောင်းလိုက်တယ်၊ ငါ့ခင်ပွန်းညစာစားပွဲသို့။ တစ်ပတ်လုံး နေ့တိုင်း လိင်ဆက်ဆံခဲ့ကြတယ်။ ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်တစ်ခုမျှသာဖြစ်သည် (အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုမတိုင်မီက၊ တစ်လတစ်ကြိမ် ပျော်ရွှင်ခြင်းအတွက်ဖြစ်သည်)။ ထုပ်ပိုးမှု သေးငယ်တာကို မကြိုက်ပါ။ နှစ်ကောင်ယူဖို့ သတိပေးရမယ်။
အသက် ၃၄ နှစ် (စပိန်) မာ့ခ်)
ငါ့နဲ့ ဇနီးသည် ၅ နှစ်သား ကလေးမမွေးနိုင်။ ငါ့သုက်ပိုးက ချို့ယွင်းနေတယ်လို့ ပြောကြတယ်။ အဲဒီမှာ တစ်ခုခု မလှုပ်ဘူး၊ ခေါင်းတွေ ချို့ယွင်းနေတယ်။ ယေဘူယျအားဖြင့်တော့ တစ်လလောက်သောက်တယ်။ ဇနီးမောင်နှံသည် ရင်သွေးကို ပြိုင်တူလုပ်သည်။ သူမဟာ အခု ကိုယ်ဝန် ဒုတိယလမှာ ရှိနေပါပြီ။ လူ!
Green Coffee – နှစ်ပတ်အတွင်း အနှုတ် 10 ကီလိုဂရမ်။ မြန်မာ – 50% လျှော့စျေး
LeaveaReply ပြန်စာ ပယ်ဖျက်ပါ